केपी ओली गोमन सापजस्तै हुन् : खनाल – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
केपी ओली गोमन सापजस्तै हुन् : खनाल
१० पुष, २०७७ १७:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओली गोमन सापजस्तै भएको बताएका छन्।
शुक्रबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खनालले यस्तो बताएका हुन्। उनले पार्टी परियताका विषयमा केपी ओलीले आफूलाई तल झारेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीलाई गोमनको संज्ञा दिए।
एक पटक हिर्कायो भने गोमन साप भाग्ने र त्यो मान्छेको तस्बिर दिमागमा राखेर मौका पाउँदा ठुगिहाल्ने प्रवृत्ति हुने भन्दै उनले केपी ओलीमाथि कटाक्ष गरे।
ओलीलाई गोमन सापको संज्ञा दिएका नेता खनालले पत्रकारलाई गोमन सापको कथासमेत सुनाउन भ्याए।
‘तपाईंलाई थाहा छ, पूर्वनेकपा एमालेमा आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नका लागि केपी ओलीले ठूलो गुटबन्दी गर्नु भएको थियो। तर, त्यत्तिबेलाको ठूलो समूहले उहाँलाई पराजित गरेर मलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँमा अत्यन्त ठूलो इगो रहयो। वास्तवमा केपी ओली एउटा इगो अर्थात् इख बोकेर हिँड्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन। कसैले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन। तर उहाँचाहिँ गोमन सापजस्तो’, नेता खनालले गोमन सापको कथा भन्दै थपे, ‘गोमन सापको कथा तपाईहरुलाई थाहा छ ? गोमन सापलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गर्यो र त्यो भाग्यो भने त्यसले दिमामा त्यसको तस्बिर सम्झिराख्छ। कुनै पनि दिन देख्यो भने डसिहाल्छ अरे ! त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो।’
नेता खनालले एमाले महाधिवेशनको प्रसंग कोट्याएर ओलीलाई गोमनको संज्ञा दिँदै एमाले र माओवादीको एकता हुँदा त्यसको बदला ओलीले लिएर आफूलाई वरियतामा तल झारेको बताए। ‘पछि गएर उहाँले बदला लिने मौका पाउनु भएन। नवौं महाधिवेशनमा समेत बदला लिने मौका पाउनु भएन’, उनले गोमनको कथा पत्रकारलाई भनिसकेपछि थपे, ‘अब पार्टी एकता भयो। दुई पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बन्ने भयो। ओलीले संयोजन समिति राख्नु हुँदैन भन्नुभयो। एक दुई बैठकमा मलाई बोलाउनु भएन। पछि वरियतामा मलाई तल राख्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट नीति र विधिमा चलेन भने त्यो बेठिक हुन्छ।’